सक्रिय संक्रमितको संख्या १५ हजार ३ सय ९३ , कुन प्रदेशमा कति संक्रमित ? - Nepal News Site
सक्रिय संक्रमितको संख्या १५ हजार ३ सय ९३ , कुन प्रदेशमा कति संक्रमित ?
२९ भाद्र २०७७, सोमबार १७:०१
काठमाडौं : आज देशभरी १ हजार १ सय ७० जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन । १० हजार ८ सय ७८ पीसीआर परीक्षण भएकोमा ३ सय ९९ महिला र ७ सय ७१ जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौंमा ४ सय ४०, भक्तपुरमा ४३ र ललितपुरमा २९ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।